Ungazifaka kanjani izicelo zezaziso ze-MEC | Ukwakheka nezifundo
Ungasifaka kanjani isicelo sezaziso zezifundo ze-MEC
UMaite Nicuesa | | Scholarship
Ukufaka isicelo semfundaze kungenye yezinyathelo ezenziwa ngabafundi abaningi lapho bethula imininingwane efanayo ocingweni olusha. Ukuphikelela emgomweni kuyingxenye yale nqubo ngoba kunezifundo ezahlukahlukene futhi, ezinye zazo, zinezicelo eziningi. Olunye losizo olwaziwa kakhulu yilolo olunikezwa yi Izifundo ze-MEC.
Ukwethula amadokhumenti ngesikhathi esibonisiwe kungenye yezinyathelo ezibaluleke kakhulu zokukwazi ukubamba iqhaza kule nqubo. Ungaqapha inqubo ekomkhulu le-elekthronikhi loMnyango Wezemfundo Nokuqeqeshwa Kwezandla.
1 Izingcingo zemifundaze ye-MEC
2 Ihhovisi le-elekthronikhi loMnyango Wezemfundo Nokuqeqeshwa Kwezandla
3 Uzazi kanjani izaziso zemifundaze ye-MEC
Izingcingo zemifundaze ye-MEC
Imemezela izifundi kanye nezibonelelo zabafundi abangemuva kokuphoqelelwa kwabafundi baseyunivesithi futhi, futhi, kulabo bafundi ababhalise iziqu zaseyunivesithi. Ukuthatha izinyathelo ezidingekayo ukuqedela le nqubo, kufanele wenze le nqubo online.
Lapho usuqedile ukunikeza yonke imininingwane edingekayo, uzoba nefayela le- irisidi. Ubufakazi obugunyaza lolu hlelo esikhathini esimisiwe.
Ihhovisi le-elekthronikhi loMnyango Wezemfundo Nokuqeqeshwa Kwezandla
Ukufinyelela kuleplatifomu ungakwenza lokho ngokubhala igama lakho lomsebenzisi kwi-electronic office. Ukuze wenze lokhu, faka ifayela lakho le- ID nephasiwedi ehambisanayo. Uma ungakaze ufake isicelo salesi sifundo futhi, ngakho-ke, awubhalisiwe, chofoza esigabeni esithi "ukubhaliswa komuntu wemvelo" lapho uzobona khona amabhokisi ahlukile anemininingwane yomsebenzisi edingekayo.
Uma uhlangabezana nanoma yiluphi uhlobo lwesigameko ukufinyelela kule sayithi, uzothola nengxenye ebekelwe ukuxazulula lolu hlobo lwesimo. Kuleli khasi lewebhu uzothola incazelo eningiliziwe yemininingwane ejwayelekile yalolu sizo.
Futhi, isikhathi sokuqala nokuphela kwe- ukuhanjiswa kwezicelo. Lapho lesi sikhathi sidlulile, le datha izophinda ivele kusimo socingo ukwazisa abathintekayo ukuthi kuzodingeka balinde unyaka ozayo ukuze babambe iqhaza.
Isikhathi lapho umfundi afinyelela khona le njongo yokwethula imibhalo sibaluleke kakhulu. Kepha kukhona umzuzu othokozisayo, oza ngemuva kokulinda isinqumo sokugcina. Kuzoba ngalesi sikhathi lapho umlingiswa oyinhloko eyazi impendulo.
Uzazi kanjani izaziso zemifundaze ye-MEC
Wazi kanjani noma yisiphi isici esihlobene nalo mbuzo? Ekomkhulu le-elekthronikhi loMnyango Wezemfundo Nokuqeqeshwa Kwezobuciko. Ngokufinyelela ngazodwana nomsebenzisi wakho wasendlunkulu kagesi, uzothola izaziso zalezo zenzo zalo Mnyango ezihlobene nesimo sesicelo sakho.
La Ihhovisi Le-elekthronikhi indawo eku-inthanethi yokwenza lolu hlobo lwenqubo lapho kubalulekile ukuthi umlingiswa ophambili aziveze ngawodwana. Ngalesi sikhala kungenzeka ukuthi uthole izaziso ngogesi futhi uqedele inqubo yokufaka izicelo zemifundaze, phambilini, eyayenziwa uqobo. Eqinisweni, ukuba semthethweni kwenqubo eyenziwa online kuyafana. Kulesi siza esiku-inthanethi unethuba lokwenza imisebenzi ehambisanayo nganoma yisiphi isikhathi sosuku unyaka wonke.
Okokuqala, uzokwazi ukwenza izinqubo ezahlukahlukene ngokuya ngenhloso. Kulokhu, faka isicelo salesi sifundo semfundo. Okwesibili, uma usuqede lolu phiko, uzoba nezaziso mayelana nezinqubo eseziqediwe. Ukuze wenze lokhu, iya kusigaba "Izaziso zami". Ekugcineni, esigabeni esithi "Amafayela Ami", uzothola isimo sabo.
Ngaphambi kokubona unyaka olandelayo wezifundo, naka lezo zifundo ofuna ukufaka kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » IYunivesithi » Scholarship » Ungasifaka kanjani isicelo sezaziso zezifundo ze-MEC
Yimaphi amafayela e-PDF futhi yiziphi izinzuzo ezinikezayo
Ungakulungiselela kanjani ukuphikiswa kwezokuphatha kwezwe